Tontolom-bolongana Kambodziana: Fanazàrana +Rindrambaiko Amin’ny Teny Khmer = Resaka Bebe Kokoa? · Global Voices teny Malagasy
Tontolom-bolongana Kambodziana: Fanazàrana +Rindrambaiko Amin'ny Teny Khmer = Resaka Bebe Kokoa?
Voadika ny 17 Desambra 2017 7:28 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Jolay 2005)
”Maniry toy ny holatra amin'ny andro fahavaratra ireo toerana fisotroana kafe sy azo anaovana Aterineto ao afovoan'i Kambodza, Phnom Penh tato anatin'ny taona vitsivitsy.” – Tharum
Ary koa, fomba fiteny lafatra ho an'ny tontolom-bolongana Kambodziana!
Miroborobo ny tontolom-bolongana Kambodziana, saingy lasa milamina sy mifandray kokoa ihany koa. Tamin'ny volana lasa teo, nihaona tao amina trano fisotrosotroana tao an-toerana ireo mpitoraka blaogy ao Phnom Penh tamin'ny fivoahana alina voalohany niarahan-dry zareo samy blaogera. (Mety hivory ao amin'ny trano fisakafoanana NGO TECH angamba ry zareo amin'ny volana manaraka?) Jinja, iray amin'ireo mpikarakara, dia nanampy blaogy am-polony tao amin'ny pejy Kambodza ao amin'ny Wiki an'ny Global Voices, mba ho moramora ho an'ireo ”cloggers” (Blaogera Kambodziana) ny hahita ny hafa sy hifampiresaka.
Tamin'ny Jona 2004 i Tharum, izay milaza ny tenany ho ”It Catcher,” no nanomboka ny blaoginy fony mbola mpianatra tao amin'ny Oniversite Nasionaly ho an'ny Fitantanana ary niasa ho an'ny Open Forum for Cambodia, ilay fikambanana izay nitondra voalohany indrindra ny imailaka tao Kambodza tamin'ny taona 1990 sy miasa hisian'ny vavahady amin'ny teny Khmer ankehitriny ary hanomboka tsy ho ela ny blaogy amin'ny teny khmer. Vao haingana no nasongadina tao amin'ny pejy voalohany tamin'ny Cambodia Daily ny blaogin'i Tharum miaraka amin'ny lohateny ”Ny Fanantenan'ireo Blaogera Nasionaly ho Fanamorana Ny Fifanakalozan-kevitra.”
Raha toa ka sarotra porofoina, i Tharum angamba no Kambodziana voalohany ao Kambodza mampakatra lahatsoratra amin'ny alalan'ny rindrambaiko natokana ho an'ny blaogy. (Mazava ho azy fa ny mpitoraka blaogy Kambodzana voalohany dia ilay Andriana taloha tao Kambodza, Mpanjaka Sihanouk, izay ny tranonkala dia nizara lahatsoratra toy ny blaogy nandritra ny telo taona fahafahakeliny araka ny lahatsoratra iray vao haingana navoakan'ny AP)
Nampianga fanahy Blaogy Kambodzana maromaro kokoa ny ”blaogin”ilay Mpanjaka Teo Aloha.
Ao anatin'ny tetikasa natomboka fikambanana mpandala demokrasia sady tsy mikatsaka tombony ara-bola, IRI, nanatontosa atrikasa fampiofanana tany amin'ny faritanin'i Kambodza ho an'ny mpianatra niisa teo amin'ny 60 avy amin'ny sekoly ambaratonga ambony sy Oniversite momba ny fomba famoahana blaogy amin'ny teny Anglisy i Lux Mean. Notanterahina tao amin'ny Ivontoerana momba ny Fampahalalam-baovaon'ny Vondrom-piarahamonina, nahitàna blaogy vaovao am-polony nosoratana olona Khmer avy ivelan'i Phnom Penh ilay atrikasa. Araka ny lahatsoratra vao haingana tao amin'ny Wired, nilaza i Lux Mean fa ny fanontaniana niraisana indrindra avy tamin'ireo nampianarina dia ny hoe afaka mamaky ny blaoginy koa ve ny olona any amin'ny firenena hafa. Mientana noho ny hery ananan'ireo blaogy Kambodziana (sy hafa) ireo amin'ny famoronana fifanakalozan-kevitra ara-politika bebe kokoa ny IRI.
Fa na any ivelan'ireo hetsika fisantarana fanazàrana midadasika ireo aza, tsikelikely ary indrindray amin'ny alalan'ny fanampiasa avy amin'ny hafa dia mizara blaogy ireo tanora Khmer. Alaina ho ohatra, Yourath, izay mipetraka ao Siem Reap. i Elizabeth Briel, Amerikana artista sy natao sesitany tao Siem Reap miasa amina tetikasa iray, Fakantsary ho an'i Kambodza.no nampianatra azy ny fomba fanaovana blaogy,
Ny fotoana no hilaza raha toa ka hanamora fifanakalozan-kevitra bebe kokoa ny blaogy Kambodziana. Toy ny nomarihan'i Tharum, ”Mora atomboka ary mora hajanona ny Blaogy.”
Hanampy hanohana ny fifanakalozan-kevitra sy hankahery feo bebe kokoa ve ny blaogy amin'ny teny khmer? (sa toy ny lazain'i Virak, ”Afaka manampy ny vahoaka Kambodziana mba hanamafy ny feony ho ren'izao tontolo izao ny Teknolojia.”) Manantena izany ny Tetikasa Rindrambaiko Misokatra an'ny Kianjan’ Fifanakalozan-kevitra ao Kambodia amin'ny fanombohany ny rindrambaikony fitorahana blaogy amin'ny teny khmer. Hahaliana ny hijery ny fomba fihetsiky ny fanjakana manoloana ny hevitr'ireo blaogera ary ny hoe hakaton-dry zareo sa tsia izy ireny.
Mety hila blaogera amin'ny teny khmer angamba ny Global Voices atsy ho atsy!